Public Health in Myanmar: June 2010
Hello doctor: I can’t stand to laugh after reading your story, Varicose Veins. Please explain about deep venous thrombosis coz my friend who lives in မတ်တတ်ရွာ got trouble with that case.
သူများ တိုင်းပြည်တွေကို ခဏခိုးထွက်ပြီးဖြစ်ဖြစ် ခဏခဏ ခိုးထွက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်၊ ဟိုမှာ အခြေတကျ နေပြီးဖြစ်ဖြစ် အလုပ် လုပ်ကြရာမှာ ကိုယ့်အရပ်နဲ့ အတော်ကြီး မတူဘူး။ “စက်ရုပ်ဝါဒ” ခေါ်ရမလားဘဲ။ အလုပ်ချိန်မှာ ထိုင်စရာဆိုတာ ထားမပေးဘူး။ ရပ်ပြီးလုပ်ရတာ မဟုတ်ရင်၊ ပြေးလွှားလုပ်ကြရတယ်။ အောက်ပိုင်း မသန်ရင် ဟန်မကျဘူး။ ကြာတော့ အောက်ပိုင်းက အတွင်းပိုင်း ရောဂါတွေ ရလာတတ်တယ်။
အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ သွေးကြောတွေက ကောင်းနေပါမှ အသက်ရှင်နိုင်တာမို့ “အသက်သွေးကြော” လို့ တင်စားခေါ်ကြတာ မှန်တယ်။ နှလုံးကနေ တကိုယ်လုံးကို လွှတ်ပေးရတဲ့ Artery သွေးလွှတ်ကြော ပိတ်တာကို အတော်များများ သိကြတယ်။ Stroke လို့ ခေါ်တယ် မဟုတ်လား။ ဆေးစာ သိသူတွေကတော့ Myocardial infarction လို့ ခေါ်ပါတယ်။ တကိုယ်လုံးကနေ နှလုံးဆီ ပြန်လာရတဲ့ Vein သွေးပြန်ကြောမှာ သွေးခဲပြီး၊ ပိတ်တာကလည်း ဆိုးတဲ့ရောဂါဘဲ။ လူတွေကို ကြိုက်တာ၊ မကြိုက်တာ ပြောရမဲ့ ပါးစပ်ကို ပိတ်ခိုင်းထာတာ အပါအ၀င် ပိတ်တာ-ဆို့တာဟာ ရောဂါဘဲ။ ဒီစာမှာ သွေးပြန်ကြော ပိတ်တာ ရေးပါမယ်။ အတိအကျ ပြောရရင် ဟို အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေ ပိတ်တဲ့ရောဂါပါ။
“လူမှန်-နေရာမှန်” ဆိုတဲ့ စကားလိုဘဲ လူ့သွေးက သူ့နေရာမှန်ဖြစ်တဲ့ သွေးကြောထဲမှာနေရင် မခဲဘူး။ အပြင်ထွက်ရရင် ခဲသွားတယ်။ အဲဒါ အလွန်ကောင်းတဲ့ အစီအမံ ဖြစ်တယ်။ ထိခိုက်မိလို့ သွေးထွက်ရင် ကိုယ့်ဖါသာ ကြက်ခြေနီလုပ်ပြီး၊ လက်နဲ့ ဖိထားပါ။ သွေးရဲ့ခဲတတ်တဲ့ သတ္တိကြောင့် သွေးတိတ်သွားတယ်။ မခဲရမဲ့နေရာ သွေးကြောထဲမှာ ခဲရင်တော့ ဒုက္ခရောက်ရတယ်။ အများဆုံးဖြစ်တာကတော့ ခြေသလုံးနဲ့ ပေါင်က အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေမှာ ဖြစ်တယ်။ သွေးခဲက ကွဲထွက်ပြီး၊ ဟိုဟိုဒီဒီ ရောက်တတ်သေးတယ်။ အရေးပါတဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့ အဆုပ်ကို သွားပိတ်တာဟာ ရောဂါဆိုး တခု ဖြစ်ပါတယ်။ Pulmonary embolism (PE) လို့ ခေါ်တယ်။ သေနိုင်တယ်။
ခွဲစိတ်ခံထားရသူတွေမှာလဲ ဖြစ်လာတတ်တာမို့ ဆရာဝန်တွေက လူနာကို ခွဲစိတ်ပြီးနောက်မှာ ဒါမျိုး ဖြစ်မလာအောင် လုပ်ပေးကြရတယ်။ နောက် အကြောင်းတရားတွေကတော့ သွေးပြန်ကြောမှာ ဒဏ်ရာရလို့၊ ရောင်လာလို့ နဲ့ ခံနိုင်ရည် ပြဿနာ တခုခုဖြစ်လို့ပါ။ သွေးလျှောက်တာ နှေးရင်လဲ ဖြစ်တတ်သေးတယ်။ သွေးက လိုတာထက်ပို ပြစ်နေရင်လည်း ဖြစ်ချင်တယ်။ နာတာရှည် လူမမာဖြစ်ရ၊ အိပ်ရာထဲ လှဲနေရ၊ ခရီးရှည် အကြာကြီး သွားရတဲ့အခါမှာလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကင်ဆာဆေး၊ (အီစထိုဂျင်) ပါတဲ့ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေကလည်း ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နဲ့ မွေးပြီး ၁-၂ လ အတွင်းမှာ သတိထားပါ။ အမျိုးသမီးများကို သွေးဆုံးချိန်မှာ ပေးရတတ်တဲ့ Estrogen ဟော်မုန်း ကလည်း ဒီရောဂါမျိုး ဖြစ်စေတတ်တယ်။
ရွှေဗမာတွေ သူများတိုင်းပြည်တွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြရတာ သန်းနဲ့ချီနေပေမဲ့ သိပ်မဖြစ်ပါလားလို့ စောဒက တက်နိုင်ပါတယ်။ အထဲက သွေးပြန်ကြောမှာ သွေးခဲလေးတွေ ရှိနေပေမဲ့ ဘာမှမခံစားရဘဲ နေတတ်တယ်။ တချို့တ၀က် လောက်မှာသာ ရောဂါ လက္ခဏာပေါ်တယ်။ ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ရောင်လာ၊ ပူလာ၊ နာလာ၊ နီလာတယ်။ မနီဘဲ အရောင် ပြောင်းလာတာမျိုးလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အကွေး-အဆန့် လုပ်ရင် ပိုနာတယ်။ ကြွက်တက်သလို ဖြစ်တယ်။ Pulmonary Embolism ဆိုတာ ဖြစ်ရင်တော့ အသက်ရှူရတာ ခက်လာ-နာလာတယ်။ ချောင်းဆိုးတဲ့အထဲ သွေးပါလာမယ်။ အသက်ရှူနှုန်းရော နှလုံးခုန်နှုန်းပါ မြန်လာတယ်။ အရေးပေါ် ဆေးရုံတက်ရလိမ့်မယ်။
ဖြစ်လာရင် ကုတာကတော့ ခဲနေတဲ့သွေးခဲ ပိုကြီးမလာစေအောင်၊ သေးသေးလေးတွေ ကွဲထွက်ပြီး၊ တခြားနေရာတွေ မရောက်စေအောင် နဲ့ နောက်ထပ် မခဲစေအောင် လုပ်ပေးရတာပါ။ Anticoagulants ဆိုတဲ့ သွေးမခဲဆေး၊ သွေးကျဲဆေးတွေ ပေးတယ်။ Warfarin နဲ့ Heparin ဆေးတွေကို အသုံးများတယ်။ ကိုယ်ဝန် ရှိတုံးဖြစ်သူတွေကိုတော့ Heparin ကိုသာ သုံးတယ်။ ၃ လကနေ ၆ လအထိ ဆေးကုရတယ်။ ကိုယ်ဝန်နဲ့ ခွဲစိတ်ရာကနေ ဖြစ်သူတွေကိုတော့ ဒီလောက် ကြာစရာ မလိုဘူး။ ဒီဆေးတွေက သွေးယိုတာ ဖြစ်တတ်ပြန်လို့ သတိထား သုံးရတယ်။ Thrombin Inhibitors ဆိုတဲ့ ဆေးကတော့ သွေးမခဲအောင် တားဆေးပါ။ Thrombolytics ဆေးကိုတော့ သွေးခဲ မြန်မြန် ပျော်စေအောင် ပေးတယ်။
Thrombectomy ခဲနေတဲ့သွေးကို ခွဲထုတ်နိုင်တယ်။ ဆေးပေးဘို့ မသင့်ရင် ဒါမှမဟုတ် ဆေးပေးနေတာနဲ့ မလုံလောက်ရင် Vena Cava Filter ဆိုတဲ့ အစစ်ကို သုံးနိုင်တယ်။ Graduated Compression Stockings နဲ့ compression hose ဆိုတဲ့ ခြေအိတ်ဆန်းကို စွပ်ထားခိုင်းတယ်။ အကိုက်အခဲပျောက်-အဖျားကျ-အရောင်လျှော့ဆေး Aspirin က သွေးကိုကျဲစေလို့ ဒီရောဂါမျိုးမှာ အသုံးကျတယ်။ တခါဖြစ်ဘူးရင် ထပ်ဖြစ်တတ်လို့ ရောဂါရှိနေသူဟာ ဆေးမှန်မှန် စစ်နေရတယ်။
ဒီရောဂါ မဖြစ်အောင် အကြာကြီး မရပ်ရသလို၊ အ်ိပ်ရာထဲမှာလဲ ရက်အကြာကြီး လှဲမနေရဘူး။ အိပ်ရာက မထနိုင်သူများ ခြေထောက်တွေ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးရတယ်။ ၀လွန်းရင်လဲ ဒီရောဂါ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တောင်ပေါ်အမြင့်မှာ နေရ၊ သွားရရင် သတိထားရတယ်။ အသက်ကြီးလာရင် မကောင်းတာတွေထဲမှာ ဒါလဲပါတယ်။ လူက ဖက်တီး၊ အသက်ကလည်း ကြီးရင် ခရီးမထွက်နဲ့။ တောင်ပေါ်သားများ နိုင်ငံခြား သွားနေချင်ရင် နှစ်ခါပြန် စဉ်းစားပါလေ။
လေယျာဉ်ပေါ်မှာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပေးဘို့ ဗီဒီယို နဲ့ ပြပေးတာက ဒါမျိုး မဖြစ်အောင်လို့ပါ။ ရေ-အရည် အများကြီး သောက်ပါ။ အရည်ထဲမှာ အရက်နဲ့ ကော်ဖီများတာ မပါဘူး။ အ၀တ်အစားကို ကြပ်နေတာမျိုး မ၀တ်ရဘူး။ တင်းကြပ်တဲ့ ဘာသာရေး အယူရှိတဲ့တိုင်းပြည်က မိန်းကလေးများ သူများနိုင်ငံတွေသွားတော့ လေယျာဉ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ အဖုံးတွေ အကာတွေ ခွါချကြတာက ဒီရောဂါ မဖြစ်အောင်တော့ ဟုတ်ပုံမရဘူး။ ဒါပေမဲ့ လှချင်တာက ကျန်းမာရေးအရ (နော်မယ်) ပါဘဲ။ Aisle တလျှောက် လူးလာ ခေါက်တုံ လူလုံးပြသလို လုပ်တာက လေယာဉ်မယ်လေးတွေနဲ့လဲ အပြန်အလှန် ပြုံးပြနိုင်တာမို့ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေပါတယ်။
Labels: Cardiovascular system
Q: ဆရာခင်မျာ။ ကျွန်တော့် အသက်က ၃၀ နှစ်ဝန်းကျင်ပါ။ ကျွန်တော် မေးချင်တာက လိင်မှုဆက်ဆံရေးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ရည်းစားနဲ့ လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်တော့်လိင်အင်္ဂါက စပြီး ၁၀ မိနစ် လောက်ဆို ကျသွားပါတယ်။ ပြန်မာအောင် လုပ်ပြီး ထပ်လုပ်ပြန်ရင်လဲ၊ ၁၀ မိနစ် ၀န်းကျင်ဆို ပြန်ပြန်ကျသွားတတ်ပါတယ်။
တခါတခါ ပြီးဖို့ လဲ အတော်လေး ကြာတဲ့အပြင် လိင်ဆက်ဆံရင်းနဲ့ မပြီးဖြစ်ဘူး။ အမြဲတမ်း Hand-job လုပ်ပေးမှ ပြီးသွားတတ်ပါတယ်။ တခါ ပြီးရင်တော့ ၁ နာရီလောက် နားပြီး၊ ပြန်ဆွပေးရင် ပြန်မာလာပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနလိုပဲ လိင်ဆက်ဆံမှု ပြန်နေရင်းနဲ့ပြန်ကျသွားတတ်ပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒက လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရင်း ပြီးချင်သူပါ။ မိန်းကလေးနဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အကြိမ်အရေ ကျွန်တော့်မှာ အတော်လေး နည်းပါးပါတယ်။ များသောအားဖြင့် masturbation လုပ်တာ များပါတယ်။ ကျွန်တော် စိုးရိမ်တာက masturbation အလုပ်များလို့လက်ရဲ့အားကို လိင်ဆက်ဆံမှုလုပ်တာ မလိုက်နိုင်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ပန်းသေပန်းညိုးများ ဖြစ်နေပြီလား ဆိုတာကိုပါ။ ကျွန်တော် အတော်လေးတော့ ဒီကိစ္စကို စိုးရိမ်နေပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သုတ်လွှတ် မြန်တာကို ထိန်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ကြားမှာ ကျွန်တော်က ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေတော့ အရမ်းကို စိုးရိမ်နေမိပါတယ်။
A: (မာစတာဘေးရှင်း) ဆိုတာ လူငယ်တိုင်း မကင်းပါ။ သူတို့တတွေ ရည်းစားသနံထား၊ အိမ်ထောင်ရက်သား ကျကြတာပါဘဲ။ ငယ်တုံးက အကျင့်ကြောင့် နောင် ဆက်ဆံရေးကိစ္စမှာ အနှောင့်အယှက် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မဖြစ်ပါ။
လိင်စိတ်ဝင်စားသူနှစ်ဦး အသားချင်း မထိတွေ့ရခင် ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါ အင်္ဂါစိုစွပ်၊ သန်မာလာတာဟာ စိတ်ကြောင့် ဖြစ်လာတာပါ။ နောက်တဆင့် အင်္ဂါတွေ ထိတွေ့လာရင် ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်မှု၊ အင်္ဂါစိုစွပ်မှု၊ အင်္ဂါသန်မာမှုတွေဟာ ပိုမို မြင့်မား လာစေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲလို အချိန်မျိုးမှာတောင် စိတ်မှာ တစုံတရာ အတားအဆီး ရှိလာတယ်ဆိုရင် နောက်ကို ပြန်ကျ၊ တစ်ကနေ ပြန်စရတယ်။ တယ်လီဖုံးလာလို့၊ တံခါးခေါက်လို့ ဆိုတာမျိုး။ ဒါ ရောဂါတခုရဲ့ လက္ခဏာ မဟုတ်ပါ။ ဇီဝကမ္မ (ဖီဇီယိုလော်ဂျီကယ်) ဖြစ်စဉ်တရပ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးတဲ့သူမှာ ပန်းညှိုးရောဂါ မရှိပါ။ ရှိတဲ့သူတွေက ၁၀ မိနစ်မပြောနဲ့ စတောင် မစနိုင်ကြရှာပါ။ အင်္ဂါချင်း ထိတွေ့မှုအဆင့် ရောက်နေရင်းကနေ ပြန်ကျသွားတာမျိုးက ပြင်ပပယောဂ မပါဘဲ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ရုပ်ပိုင်းက ကောင်းနေတာမို့ စိတ်ပိုင်းကို ပြင်ဘို့ လိုမယ်။ “အင်္ဂါသန်မာမှု” ဆိုတာ စိတ်ဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့ အများကြီး ဆိုင်တယ်။ Viagra ဆေး ဆိုတာတောင်မှ ပန်းသေ-ပန်းညှိုးကို ဆေးတန်ခိုး တခုထဲနဲ့ မဟုတ်ဘဲ၊ စိတ်ထဲက ဖြစ်ပေါ်လာမှ သွေးတွေ ပိုလျှောက်လာလို့ သန်မာလာစေတာ ဖြစ်တယ်။
စိတ်ဖြစ်ပေါ်မှုကို ဘယ်လိုရအောင် လုပ်မလဲ။ ရိုးရိုးပြောရင် စိတ်ကိုနိုးဆွစေနိုင်တဲ့ အတွေး၊ အမြင်၊ အကြား၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အထိအတွေ့၊ ဆိုတဲ့ အာရုံခြောက်ပါး ဖြစ်ပါတယ်။ တယောက်နဲ့ တယာက် မတူပါ။ ဂီတ၊ အစားအသောက်၊ ကြိုက်တာခြင်း မတူကြသလိုပါဘဲ။ ခက်တာက စိတ်ကို အာရုံတခုမှာ စူးစိုက်ထားနိုင်အောင် လူတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ Zen ကို ဒီလိုကိစ္စနဲ့ တွဲရေးတာမျိုး ဖတ်ချင် ဖတ်ဘူးကြလိမ့်မယ်။
လက်ကိုသုံးလို့ ပိုအဆင်ပြေတာကို ထောက်ရင် လက်ရဲ့ လှုတ်ရှားမှုတွေဟာ စိတ်ကျေနပ်-သာယာမှုကို ပိုပေးနိုင်ပြီး၊ မ အင်္ဂါကို အသုံးပြုခြင်းက ဒီလောက် အဆင်မပြေတဲ့သဘော ဖြစ်နေတယ်။ အဆင်ပြေအောင် လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ကျားနဲ့ မ၊ ရုပ်နဲ့ စိတ်၊ လေးချက်ရှိတယ်။
ကျားအင်္ဂါရဲ့ ခန္ဓာဗေဒနဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်အရ လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အချက်အလက်၊ အခြေအနေတွေ သိဘို့ လိုလာတယ်။ Male orgasm ယောက်ျားပြီးခြင်းကိုဘဲ ရွေးထုတ်ပြောကြတာပေါ့။ ကိုယ့်လက်ကို အသုံးချတဲ့အခါ ဘယ်နေရာကို နိုးဆွမှုဖြစ်စေသလဲ။ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လို ထင်မြင်-ခံစားနေရင်းနဲ့ ပြီးဆုံးသလဲ။ ကိုယ့်အဖေါ်နဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ အဲလို အခြေအနေမျိုးအတိုင်း ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
ကျားအင်္ဂါရဲ့ ထိပ်ဖျားပိုင်းဟာ အဓိကကျပါတယ်။ ထိပ်ဖျားပိုင်းမှာ အာရုံကြောတွေ စုဝေးနေတယ်။ တိတိကျကျ ပြောရရင် ထိပ်ဖျား (ခေါင်း) နဲ့ သူ့ရဲ့အောက် အလည်နေရာတွေက အရေးပါတယ်။ အရေပြား တွဲနေသလိုရှိတဲ့ နေရာပါ။ ဆွဲကြည့်ရင် မြားဦးပုံမျိုး။ သူ့ကို ဆွဲတင်းခြင်းဟာ အင်္ဂါကို သန်မာစေအောင် ဖြစ်စေသလို ခံစားမှုလည်း အများဆုံး ရစေတယ်။ လက်ကို အသုံးပြုရင်လည်း ဒါကို ဖြစ်စေအောင် လုပ်တာပါဘဲ။ ဒီတော့ ဆက်ဆံချိန်မှာလည်း အဲဒါမျိုး ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
မ အင်္ဂါကလည်း အဆင်ပြေဘို့ လိုသေးတယ်။ မွေးလမ်းဟာ ကလေးဖွါးရပြီဆိုတာနဲ့ အနည်းနဲ့အများ ပျက်စီးသွားရတယ်။ မွေးလမ်းကြောင်း ချဲ့မွေး၊ ပြင်ချုပ်ပေးတာတောင် မတူတော့ပါ။ တချို့က ပြန်မချုပ်ဖြစ်ပါ။ ချုပ်အုံးတော့ ချုပ်ရိုး မကောင်းတာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ပြန်ချုပ်ရာမှာလည်း ကြွမ်းကျင်မှု လိုသေးတယ်။ ကလေး မွေးဘူးတာနဲ့ မ အင်္ဂါအ၀ရဲ့ အောက်တည့်တည့် နေရာက စုတ်ပြဲသွားတော့တယ်။ ကလေး မမွေးဘူးရင်တောင်မှ တချို့စုတ်သွားတတ် သေးတယ်။ တင်းအား လျှော့သွားလို့၊ ထိမိစေတာကို နည်းသွားစေတယ်။ မ အင်္ဂါကို လိုတယ်ထင်ရင် ခွဲစိတ်ပြုပြင်ပြီး၊ အပျိုနဲ့ မခြားအောင် ဆရာဝန်များက ပါရမီ ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။ အပျိုစစ်-မစစ်ဆိုသူတွေမှာ ကွာခြားသွားပါပြီ။ ဒါကလည်း အကောင်း အဆိုးရှိသေးတယ်။ အတွေ့အကြုံ ရလာလို့ ပိုအဆင်ပြေစေတာလည်း ရှိတတ်တယ်။ “တခုလပ်နဲ့ အပျိုစင် ဘယ်ဒင်းသာလို့ယဉ်” ဆိုတာလိုပေါ့။
နောက်ပြီး မ အင်္ဂါအ၀သာမက အဲဒီနေရာတ၀ှိုက်က ကြွက်သားနဲ့ အရွတ်တွေ သန်မာနေဘို့ လိုတယ်။ တချို့ဆိုရင် ထိန်းအား၊ တင်းအား၊ ပင့်အားတွေ လျှော့ကျပြီး၊ Prolapse of the Uterus "သားအိမ်ကျရောဂါ” ဖြစ်ရတယ်။ သားအိမ်ကျတယ် ဆိုတာ ခြုံပြောတာပါ။ အမှန်က သားအိမ်က မွေးလမ်းထဲ၊ မွေးလမ်းအပြင်ကို ထွက်လာတဲ့အဆင့်ထိ မရောက်သေးတာက ပိုတောင် များသေးတယ်။ သားအိမ်ကျတယ်လို့သာ ပြောတာ အမှန်က သားအိမ်ရှေ့က ဆီးအိမ် ကျ (ကြွံ) တာ Cystocele က အဖြစ်အများဆုံး။ ပိုဆိုးသူတွေက မွေးလမ်းနောက် (အောက်) ဖက်မှာရှိတဲ့ အစာဟောင်းအိမ် ကျ (ကြွံ) တာ Rectocele ဖြစ်တယ်။ ကံမကောင်းရင် ဆီးအိမ်၊ သားအိမ်၊ အစာဟောင်အိမ် သုံးခုလုံး တပြိုင်နက် ဖြစ်တယ်။ ခွဲစိတ်လို့ ရပါတယ်။
ကလေးမီးဖွါးရလို့ မဟုတ်ဘဲ၊ အနေအထိုင် လိုလို့ သားအိမ်ကျသူ အပျိုလေးတွေကို ခွဲစိတ်ပေးရဘူးတယ်။ အလေးအပင် မ တာ၊ အထိုင်အထ လုပ်ရတာ၊ အကြာကြီး ချောင်းဆိုးတာ၊ နှာချေတာ၊ ၀မ်းညှစ်သွားရတာ စတဲ့ ဗိုက်ထဲမှာ (ပရက်ရှာ) ဖြစ်စေတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေမှာ မဆင်ခြင်မိလို့ ဖြစ်ကြရတယ်။ (ဗဂျိုင်းနား) ဆိုတာ လုံခြုံမှုရှုဒေါင့်က ကြည့်ရင် (၀ိခ်-ပွိုင့်) အားနည်းချက်တခု ဖြစ်နေတယ်။ ဗိုက်ထဲမှာ တင်းအား၊ ဖိအားဖြစ်လာတိုင်း သူ့အပေါ် သက်ရောက်စေတယ်။ လူကြီး သူမတွေက မိန်းကလေးတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက “မိန်းကလေးလိုထိုင်” လို့ သင်တတ်တယ်။ ယဉ်ကျေးမှုအရသာမက ကျန်းမာရေး အရပါ ကောင်းတယ်။ ဆောင့်ကြောင့် မထိုင်သင့်ဘူး။
ဒီအင်္ဂါတွေမှာ ခန္ဓာဗေဒအရ အထိန်းတွေက ရှိနေပြီးသားပါ။ အထိန်းတွေဆိုတာ ကြွက်သားတွေနဲ့ အရွတ်ပြားတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေကနေ စုစည်း မ တင်ပေးထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သတိမထားဘဲ၊ မထိန်းဘဲ၊ အမှတ်တမဲ့ဆိုသလို ချောင်းဆိုး၊ နှာခြည်၊ အလေးအပင် မ၊ အထိုင်အထတွေ လုပ်ရရင် ဒီကြွက်သားတွေကို အားနည်း၊ ပျက်စီးစေနိုင်တယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရင် စုစည်း မ တင်ပေးတဲ့အား လျှေားနည်းပြီး၊ ထွက်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့ မွေးလမ်းဆီကို ဦးတည်ပြီး ကျ၊ ထွက်၊ ကြွံ ဖြစ်လာ တော့တယ်။ ဆက်ဆံရာမှာ လာထိခိုက်တယ်။
ဒီကြွက်သားတွေက စိတ်ကနေထိန်းလို့ရတဲ့ အမျိုးအစားတွေဖြစ်တာ ကံကောင်းတယ်။ အားနည်းတယ်ဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီး ပြန်ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်တယ်။ Pelvic floor exercise လို့ခေါ်တယ်။ သိပ်မခက်၊ သိပ်အပမ်းမကြီးပါ။ ဘယ် ကြွက်သားတွေလဲ ဆိုတာသိဘို့ အရင်သင်ပေးရတယ်။ ဆီသွားနေတုံး မပြီးခင် ရပ်သွားအောင် အထိန်းခိုင်းတဲ့အခါ နေရာတ၀ှိုက်က ကြွက်သားတွေကို စိတ်ကနေ ကြုံ့ပေးရတယ်။ ဘယ်ကြွက်သားတွေဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီဆိုရင် တကယ် ဆီးမသွားဘဲ နေရင်း-ထိုင်ရင်း၊ အလုပ်လုပ်ရင်း၊ လှဲနေရင်း အဲဒီကြွက်သားတွေကို စိတ်ကနေ တင်းလိုက်၊ လျှော့လိုက် လုပ်ပေးတာက လေ့ကျင့်ခန်း ဖြစ်တယ်။ တခါလုပ်ရင် ၁၀-၂၀ ကြိမ်၊ နေ့တိုင်း ၂ ကြိမ် လုပ်ပါ။
နောက်တချက် လိုသေးတယ်။ (ပိုတက်ဆီယမ်) ဓါတ်ဆား နည်းနေရင် ကြွက်သား အားမကောင်းဘူး။ အစားအစာထဲမှာ နည်းနေတာနဲ့ ၀မ်းပျက်တာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်တယ်။ (ပိုတက်ဆီယမ်) ကြွယ်ဝတဲ့အစားတွေက ငှက်ပြောသီး၊ လိမ်မော်သီး၊ စပျစ်သီး၊ ဆီးသီး၊ ဖရုံ၊ ဟင်းနုနွယ်၊ အာလူး၊ ပဲသီးတောင့်၊ ကွမ်းသီးဂေါ်ဖီထုပ်၊ မုံလာဥ၊ ဒိန်ချဉ်၊ စတာတွေ ဖြစ်တယ်။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းနဲ့ အုန်းရည်သောက်တာ ကောင်းတယ်။ လိုရင် Potassium ဆေးသောက်ပါ။
ဆက်ဆံတာကို ဆက်ကြရအောင်။ ဆက်ဆံနေစဉ် ကျား အင်္ဂါက အပေါ်ဖုံးအရေပြားကလည်း ဆွဲလှန်၊ ဆွဲပိတ်၊ လှုတ်ရှားမှု လုပ်တယ်။ လက်နဲ့လည်း ဒါမျိုလုပ်တာဘဲ။ အင်္ဂါနှစ်ခုလုံး သုံးတာလည်း ဒီဖြစ်စဉ်က အချိန်အများဆုံး ယူရတယ်။ ကျားအင်္ဂါ ထိပ်ဖျားကိုရော ပြောခဲ့တဲ့ ခေါင်းအောက်နေရာကိုရော ထိမိစေတာဖြစ်ရင် ခံစားမှု အများဆုံး ရစေတယ်။ မ အင်္ဂါဟာ အ၀နဲ့ အတွင်းပိုင်းတွေက မတူကြဘူး။ အ၀က ကျဉ်းတဲ့အပြင် ကြွက်သားက လှုတ်ရှားနိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျားအင်္ဂါက အာရုံကြော အများဆုံးနေရာနဲ့ မ အင်္ဂါရဲ့ အကျဉ်းဆုံးနေရာ နှစ်ခု ထိမိစေတာဟာ ကျားအတွက် ပြီးချင်စိတ် ပိုစေတယ်။ ပြောခဲ့သလို မ အင်္ဂါကလည်း ကျန်းမာနေမှ ပိုကောင်းတယ်။
နောက်ဆုံးအချက်က မ စိတ်။ အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ် တယောက်နဲ့ တယောက် လိင်စိတ် အနည်းအများ မတူကြပါ။ အတွေ့အကြုံ၊ အသက်၊ အခြေအနေအရ မတူကြပါ။ (လယ်ဗယ်) တူတွေဆိုရင် အဆင်ပြေဆုံးပါ။ မတူပေမဲ့ တယောက် ယောက်ကနေ ဦးဆောင်နိုင်တယ်။ တဦးနဲ့တဦး ချစ်ခင်စိတ်ရှိသူများမှာသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ကိုယ့် (ပါတနာ) ကိုပါ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဘို့ စည်းရုံးပါ။
တယောက်က ခံစားမှု ကောင်းတဲ့ အခြေအနေဟာ နောက်တယောက် အတွက်လည်း အတူတူဘဲ။ အနေအထား၊ နည်းလမ်း၊ လှုတ်ရှားမှု၊ စကား၊ အနံ့၊ စတာတွေ အားလုံးဟာ နှစ်ဦးလုံးအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေစေသင့်တယ်။ စိတ်မစောပါနဲ့။ မစိုးရိမ်လွန်းပါနဲ့။ ဆက်ဆံကြတာဟာ တခါတလေ ပြီးပြီးပျောက်ပျောက်၊ တခါတလေ တမေ့တမြော။ တခါတလေ စီစီစဉ်စဉ်။ တခါတလေ ဟောဟောဒိုင်းဒိုင်း။ ဒါ့ကြောင့် အမြဲ (ပါဖက်)ချည်း မဖြစ်တတ်တာမို့ မဟုတ်တဲ့ အခါမျိုးအတွက် သောက မထားပါနဲ့။ အရည်အတွက်ကနေ အရည်အသွေး တိုးတက်လာတာ စုံတွဲတိုင်းပါ။
အောက်က ရေးပြီးသားစာတွေကို အချိန်ရရင် ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၂) Early ejaculation http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2009/12/early-ejaculation.html
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၄) Masturbation http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/01/masturbation.html
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၇) အမျိုးသမီး ပြီးခြင်း Female orgasm http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/06/female-orgasm.html
မဖြစ်ဘူးသူ မရှိတဲ့ ရောဂါတွေထဲမှာ အဖြစ်အများဆုံးက ဘာလဲ။ မှန်အောင်ဖြေနိုင်သူတွေရော မှားသူတွေပါ ၀မ်းလျှောတာ မကြာမကြာ ဖြစ်ကြရတယ်။ ဘယ်ဆေး သောက်ရမလဲကိုလည်း လူတိုင်းလိုလိ်ုက ဆေးနည်း ပေးတတ်ကြသေးတယ်။ အရင်ကဆို ဗမာပြည်မှာ (သာလာဆပ်) သောက်ခိုင်းကြမယ်။ နောက်ပိုင်းလူတွေက ပိုသိလာကြတာမို့ ORS ဓါတ်ဆား ထုပ်ကို ညွှန်းမယ်။ စေတနာ ပိုသူတွေက (မက်ထရို) ကိုပါ အသောက် ခိုင်းချင်ခိုင်းလိမ့်မယ်။ မသိတသိနဲ့ နည်းနည်း သိတာတွေထဲက လွဲတာတွေ့ရင် ပြင်နိုင်အောင် ရေးပါရစေ။
ရောဂါနာမည်တွေက Diarrhea, Loose motion, GE, Traveler’s diarrhea အမျိုးမျိုး ခေါ်ပါတယ်။ တနေ့မှာ ၃ ခါထက် ပိုသွားရင် ၀မ်းလျှောတာလို့ WHO က ဦးတိကျတွေက သတ်မှတ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ လူတိုင်း ကိုယ့်အကျင့်နဲ့ ကိုယ် ရှိကြတာပါ။ သွားနေကြထက် “ပိုရင်၊ ပြောင်းရင်” တခုခုဖြစ်ပြီလို့ သိလိုက်ပါ။ တခုခုလုပ်ပါ။
၀မ်းပျက်-၀မ်းလျှော ကို (ဗိုင်းရပ်စ်) ပိုးကြောင့်က အများဆုံး ဖြစ်စေတယ်။ အများဆုံးဆိုတာ တကယ့်အများဆုံး။ ၁၀ ခါ ဖြစ် ၉ ခါ ဖြစ်စေတာ (ဗိုင်းရပ်စ်)ပါ။ ကြုံတုံးရေးရအုံးမယ်။ (ဗိုင်းရပ်စ်) ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ တခြားရောဂါတွေကလည်း များတယ်။ HIV ပိုး၊ အသဲရောင် A, B, C ပိုး၊ တုပ်ကွေး၊ အအေးမိ၊ ကျောက်၊ ဦးနှောက်မြှေးရောင်၊ ၀က်သက်၊ ကြွက်နို့၊ (ပိုလီယို)၊ ခွေးရူး၊ စတာတွေပါ။ (ဗိုင်းရပ်စ်) ဆိုတဲ့ အင်မတန် သေးငယ်လွန်းလှတဲ့ ဒီအကောင်ကို အလွန်မတန် နာမည်ကြီးလှတဲ့ ဆရာဝန်တွေတောင်မှ မနိုင်ကြသေးပါ။
Virus ကြောင့် မဟုတ်ရင် (ဗက်တီးရီးယား) ကြောင့် ၀မ်းပျက်စေပါတယ်။ ဘယ်က၀င်သလဲ။ ပါးစပ်ကနေ၀င်တာ။ ပါးစပ်ထဲ ဘာထည့်ကြလဲ။ အစားအသောက်နဲ့ ရေ။ ကလေးငယ်ဆိုရင် တွေ့ကရာထည့်တာ။ ဘယ်အကောင် ၀င်လာလာ အူသိမ်ကို ရောင်စေတယ်။ အစာအိမ်ရော အူပါ ရောင်ရင် GE ခေါ်တယ်။ ရောင်လာရင် လှုပ်ရှားတာ ပိုမြန်လာတယ်။ အူတွေ လှုတ်လွန်းတာ နားကြပ်မပါဘဲ လူနာကိုယ်တိုင် သိတယ်။ ဗိုက်နာမယ်။ စားလိုက် သောက်လိုက်တဲ့ အစာနဲ့ ရေကို ကောင်းကောင်း စုပ်မယူနိုင်တော့ဘဲ၊ ၀မ်းထဲပါသွားမယ်။ ၀မ်းသွားရတဲ့ အကြိမ်တွေ များမယ်။
လူဆိုတာက ရေကို စုပ်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ထုတ်တာဖြစ်ဖြစ် ဆားပါမှ လုပ်နိုင်တာ။ ရေတွေထွက်တော့ ဆားတွေပါ ထွက်တာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် ၀မ်းလျှော-၀မ်းပျက်ရဲ့ မကောင်းကျိုးဆက်ဟာ ရေဓါတ်-ဆားဓါတ် ဆုံးရှုံးတာ ဖြစ်တယ်။ ၀မ်းသွားရင်း ရေတွေ အများကြီး ပါသွားတာက ကောင်းကျိုး တမျိုးတော့ ရတယ်။ ပိုးတွေပါ ပါသွားတာကိုး။ ဒါ့ကြောင့် ၀မ်းပိတ်ဆေးကို အလွယ် မသုံးသင့်ကြဘူး။ ပြောခဲ့သလို (ဗိုင်းရပ်စ်) ကို သတ်တဲ့ဆေးက မရှိဘူး။ ဓါတ်ဆားထုပ်သာ အရင်လုပ်ပါ။
ဆေးလိုလို့ သုံးရင် Loperamide (Imodium, Kaopectate II) ကို ၄ မီလီဂရမ်၊ ၂ ပြား စသောက်ပြီး၊ ၀မ်း ၁ ခါ သွားတိုင်း၊ ၁ ပြား သောက်နိုင်တယ်။ အာခေါင်ခြောက်၊ ခေါင်းနဲနဲမူးတာသာ ဖြစ်တတ်တယ်။ Lomotil ကိုတော့ တခါသောက် ၂ ပြား၊ တနေ့ ၃-၄ ကြိမ်။ တခြား ဆေးတွေကတော့ Bismuth Subsalicylate, Diphenoxylate and Atropine, Tincture of Opium (ဘိန်း)၊ Charcoal (မီးသွေး) စတာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဘိန်းလည်း အရမ်းမစားနဲ့ မီးသွေးလဲ အရမ်းမ၀ါးနဲ့။
၀မ်းသွားတာအပြင် နဲနဲဖျားတာ ရှိမယ်။ သွေး-အကြိအချွဲပါမယ်၊ တပြည်တရွာ သွားရင်းဖြစ်မယ် ဆိုရင် (ဗက်တီးရီးယား) ကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ORS အပြင် ပိုးသေစေမဲ့ဆေးကို သေခြာပေါက် သောက်ရမယ်။ Septrin လို့ လူသိများတဲ့ဆေး Co-trimoxazole ကို (ဆာလ်မိုနဲလား) ကြောင့် ဝမ်းပျက်တာ။ (ရှီဂဲလား) ဝမ်းကိုက်တာတွေမှာ သုံးနိုင်တယ်။ ၂ နှစ် အောက် ကလေးတွေကိုတော့ မပေးသင့်ဘူး။ ဒီဆေးက ယေက်ျား ဆီးအိမ်-ဆီးကြိတ်ရောင်၊ ကျောက်ကပ်ပြွန်ရောင်၊ ဆိုင်းနပ်စ်၊ နားကိုက်တာတွေ အတွက်ပါ သုံးပါသေးတယ်။
Furazolidone ဆေးကိုတော့ (ဂိုင်ယာဒီးယား) ပိုးဝင်လို့ ဝမ်းပျက်တာ၊ (ဗက်ဆလရီ) ဝမ်းကိုက် နဲ့ ခရီးသွား ဝမ်းပျက်တာ တွေအတွက် ပေးနိုင်တယ်။
Metronidazole (မက်ထရို-နိုက်ဒါဇိုးလ်) ဆိုတဲ့ဆေးက ရောဂါအတော်များများအတွက် သုံးနိုင်တယ်။ (GE) အစာလမ်း ရောင်တာ၊ ခရီးသွားဝမ်းပျက်တာ၊ (ဂိုင်ယာဒီးယား) ပိုးဝင်လို့ ဝမ်းပျက်တာ၊ (အမီးဘား) ဝမ်းကိုက်တာ၊ (အမီးဘား) သွားဖုံး ရောင်တာ၊ (အမီးဘား) အသဲပြည်တည်တာ၊ လေမကြိုက်တဲ့ပိုးကြောင့် အူမကြီးရောင်တာ၊ မွေးလမ်းကြောင်း ရောင်တာ၊ တင်ပါးဆုံအတွင်း အင်္ဂါတွေ ရောင်တာ၊ ဦးနှောက် ပြည်တည်နာ၊ ဆီးပြွန်ရောင်တာတွေ အတွက်ပါ ပေးတယ်။ ရောဂါ မတူရင် ဆေးအဆ မတူပါ။ ၁ ပြား ၃ ကြိမ်ကနေ ၂ ပြား ၃ ကြိမ်အထိ ပေးရတယ်။ ကိုယ်ဝန် နုသေးရင် မပေးသင့်ဘူး။ နို့တိုက်နေရင် နို့ထဲပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ပျို့-အန်၊ ဗိုက်နာ၊ ဆီးနီ၊ အစားပျက်၊ ကိုယ်ပူမယ်။ တကယ် မလိုဘဲ မသောက်ပါနဲ့။
ORS ဓါတ်ဆားထုပ်ကို ပါးစပ်ကနေ နိုင်အောင် ဖြည့်မပေးနိုင်ရင် သွေးကြောထဲကနေ သွင်းရမယ်။ လူကို ကြည့်ရင် ပြော့ခွေနေမယ်။ မျက်တွင်းချိုင့်-ငယ်ထိပ်ခွက်နေမယ်။ လက်နဲ့ ဗိုက်က အရေပြား မ, ကြည့်ရင် တော်တော်နဲ့ အောက်ကို ပြန်မကျဘူး။ ခြေ-လက် အေးစက်နေမယ်။ လက်ကောက်ဝတ် သွေးခုန်တာ စမ်းလို့ခက်၊ စမ်းမရဖြစ်မယ်။ သွေးဖိအားကျ၊ တိုင်းမရ။ အရေးကတော့ ပေါ်ပြီ။ အသက်လုရပါတော့မယ်။
RL ဆိုတဲ့ Drip က ORS ပါဘဲ။ များများသွားရင် မြန်မြန်သွင်းပါ။ အကြိမ်များတာထက် ပြောခဲ့တဲ့ လက္ခဏာတွေက ပိုအရေးကြီးတယ်။ သွင်းတာ နှေးသေးရင် နှစ်လုံး တပြိုင်နက် သွင်းပါ။ တခါတလေ လက်နှစ်ဖက်၊ ခြေနှစ်ချောင်းကနေ Drips လေးစင်း တပြိုင်ထဲ သွင်းရတတ်တယ်။ ဒါမှ လေးဘက်နာတာ။ GE နဲ့ ကာလ၀မ်းလိုဖြစ်ရင် လုပ်ရတတ်တာမျိုး။
Cholera ကာလ၀မ်း ဖြစ်စေတဲ့ အကောင်တွေကနေ အဆိပ်လိုမျိုးပါ ထုတ်တယ်။ Secretory diarrhea ခေါ်တယ်။ အူနံရံက (ဆဲလ်) တွေထဲက ရေတွေပါ ထွက်သွားစေတယ်။ ကပ်ရောဂါတခု ဖြစ်တယ်။ အမြန်ကူးစက်လို့၊ နေရာတခုမှာ လူတွေ အများကြီးလာ ဖြစ်တယ်။ ရေနဲ့ဓါတ်ဆား နိုင်အောင် ပြန်မဖြည့်နိုင်ရင် သေတယ်။
ရွာတရွာမှာ ကာလ၀မ်းဖြစ်တယ်။ တချို့သေကုန်ကြပြီ။ အဖိုးကြီးတယောက် သားတွေ၊ သမီးတွေက အစားအသောက် ဆင်ခြင်ဘို့ ပြောတာ နားမထောင်ဘူး။ သူ့မှာ အားကိုးစရာ ရှိတာကိုး။ ဗေဒင်က “သူများသတ်လို့သာ သေရမယ်” လို့ ဟောထားတာ။ ၀မ်းရောဂါကအစ ဘာရောဂါမှ ဂရုစိုက်စရာ မလိုဘူးပေါ့။ ကူးပါလေရော၊ ဖြစ်ပါလေရော။ သေပါလေရော။ ကာလ၀မ်းမို့ ချက်ချင်း သင်္ဂြိုလ်ကြရတယ်။ အကာလညအခါ ဖျာလိပ်ထဲမှာထည့် သင်္ချိုင်းကုန်းပို့ရတယ်။ သုဘရာဇာများက မူးချိန်ပေါ့။ အဖိုးကြီးအလောင်း တွင်းထဲပြစ်ချ၊ အရက် ဆက်ချနေလိုက်ကြတယ်။ အဖိုးကြီးက တကယ် မသေသေးဘူး။ Coma-like state မြောနေတယ် ခေါ်တာမျိုးပေါ့။ သတိပြန်ရလို့ မြေကျင်းထဲက ထလာတော့တယ်။ အရက်မူးမူးနဲ့ သုဘရာဇာတွေက တစ္ဆေမှတ်ပြီး၊ ပေါက်ပြားနဲ့ ခေါင်းချလိုက်တာ အခုမှ တကယ်သေပါလေရော။ မှန်လိုက်တဲ့ ဗေဒင်။
Labels: Communicable disease, Gastrointestinal system
ကိုယ်ဝန်မဟုတ်တဲ့ ဗိုက်ထဲကအလုံး Ovarian Cyst
(၁) ကျွန်မ အသက် ၂၅ တုံးက ရေအိတ် ထုတ်ဖူးပါတယ်။ သားဥပြွန်တခုပါ ထုတ်လိုက်ရလို့ ယခု အသက် ၃၃ နှစ်မှာ ကလေးယူဖို့ လွယ်ကူနိုင်ပါသလား။ ဘာအခက်အခဲများ ရှိနိုင်ပါသလဲ။ နောက်နှစ်မှာ ကလေးယူဖို့အတွက် ခုချိန်မှာ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါး၊ ဘာတွေ ကြိုတင် မှီဝဲဖို့ လိုပါသလဲ။
(၂) ရေအိတ်က ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲ သေချာသိချင်ပါတယ်။ အပျို-အအို မရွေး အသက်အရွယ် မရွေး ဖြစ်နေတာကိုလဲ တွေ့နေရပါတယ်။ Ovarian Cyst လို့ ရေးထားပါတယ်။ မခွဲခင်က ဗိုက်မသိမသာလေး ပူပါတယ်။ နဂိုက ပိန်တဲ့လူဆိုတော့ ၀လာသလို ထင်ရတယ်။ ဗိုက်ဆာလို့ အစာစားမယ်ဆိုတော့ နဲနဲဘဲ စားရသေးတယ်၊ ဗိုက်က ပြည့်သွားပြီး၊ ဗိုက်တင်းသွားတယ်။ ဆက်စားချင်ပေမဲ့ မစားနိုင်တော့သလိုဖြစ်တယ်။ ရင်ပြည့်နေသလို ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလောက်ဘဲ ခံစားရပါတယ်။ အိတ်ထမတင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ကြည့်တော့လဲ ဘာမှမထူးခြားဘူး။ ဗိုက်ထဲမှာ အလုံးဖြစ်နေမလားဆိုပြီး။ စိုးရိမ်လို့ ဆေးခန်း သွားတော့မှ ရေအိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ ရေအိတ်ထဲမှာ အရည်နောက်နောက်တွေလို့ဘဲ ပြောပါတယ်။ တခြားဟာတွေ တွေ့တယ်လို့တော့ မပြောပါဘူး။ သားဥပြွန်မှာ သွေးကြောတွေ ရစ်ပတ်နေလို့ ရေအိတ် ထုတ်ရ ခက်တဲ့အတွက် အဲဒါပါ ထုတ်လိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
A: အရွယ်ရောက် အမျိုးသမီးတိုင်း မျိုးဥအိတ်မှာ အလုံးဆိုတာတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကုစရာမလိုဘဲ ပျောက်သွားတာက များပါတယ်။ ကုစရာလိုတဲ့ Ovarian Cyst ဆိုတာကလည်း အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတခုပါ။ အရွယ်မရွေး ပြောရမလားဘဲ။ အပျိုလေးတွေရော အဖွါးကြီးတွေကိုပါ ခွဲပေးရဘူးတယ်။ Tumor ခေါ်တဲ့ အလုံး-အကြိတ်တွေဟာ ကင်ဆာ မဟုတ်တာရော ဟုတ်တာပါ၊ ဘာလို့ဖြစ်သလဲ အတိအကျ ပြောမရတဲ့ အမျိုးအစားပါ။ ကံတရားကိုသာ လွှဲချကြရအောင်။
Ovary ဆိုတာ အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ ဘယ်နဲ့ညာ တခုစီရှိတယ်။ Uterus သားအိတ်ဘေးက ချိုလိုထွက်နေတဲ့ Uterine tubes သားအိတ်ပြွန် နှစ်ဘက်ရဲ့ အဖျားဘက် အောင်နားမှာ တွဲလောင်းလေး ရှိနေတယ်။ အရွယ်ရောက် အမျိုးသမီး တဦးရဲ့ မျိုးဥအိတ်က ၃ x ၁့၅ x ၁့၅ စင်တီမီတာ အရွယ်ရှိတာပါ။ လက်တဆစ်လောက်ပေါ့။ ဒီဟာလေးကနေ Ovarian Cyst ဖြစ်ရင် ကိုယ်ဝန်ရင့်မာ အရွယ်လောက်ထိ ကြီးလာနိုင်တယ်။
အလုံးဖြစ်လာတာကို အတော်များများ သတိမထားမိတတ်ပါ။ ရာသီလာတာလည်း ပုံမှန်။ နာတာကလည်း မသိမသာ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သလို ဗိုက်ကလေး ပူလို့ စူလာမှ သိရတာ များတယ်။ အလုံးက ဗိုက်ထဲမှာ (အမှန်က ဗိုက်အောက် တင်ပါးဆုံရိုးကွင်းထဲမှာပါ) သူနဲ့ တွယ်နေတဲ့ သားအိတ်ပြွန်က နောက်တို့ ဘေးတို့မှာ ကပ်နေတာ မဟုတ်လို့ ခပ်လွယ်လွယ် ရွေ့ရှား လှုတ်ရှားနိုင်တယ်။ လှုတ်ရင်း၊ ရွေ့ရင်းနဲ့ အညှာနဲ့တူတဲ့ နေရာက လိမ်ပြီး၊ သူ့ဟာသူ ချည်သလို ဖြစ်တတ်သေးတယ်။ အဲလိုဖြစ်ရင် နာတာခံစားရတော့မယ်။ မခွဲရင် သွေးထွက်၊ ပေါက်ထွက်ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒီရောဂါကို ခွဲကုရတာပါ။ ဖြစ်လာတဲ့အလုံး သပ်သပ်ကို ခွဲစိတ်ထုတ်လိုက်တာက အကောင်းဆုံး။ အလုံးဖြစ်လာတာက မျိုးဥအိတ် တခုလုံးကနေ ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပါ။ တနေရာကသာ ဖြစ်တာ။ ဒါ့ကြောင့် ကောင်းနေသေးတဲ့ မျိုးဥအိတ်ကို ချန်ထားဘို့လိုတယ်။ အလုံးက အဖုံးနဲ့ရှိလို့ ခွဲစိတ်ရှင်းရတာ ပိုလွယ်တယ်။ တခါတလေ မလွယ်ဘူး။ ကြာမှ ခွဲရရင်၊ ကြီးလွန်းရင်၊ မျိုးဥသာမကာ ပြွန်ကိုပါ ချန်မရတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မျိုးဥအိတ်တဖက်နဲ့ ပြွန်တဖက် မရှိရင် သားသမီးရဘို့ တ၀က်တော့ အခွင့်အလမ်း နည်းသွားစေတယ်။ မျိုးဥအိတ်နဲ့ ပြွန်၊ နှစ်စုံလုံး ရှိနေပါမှ အမျိုးသမီး ပီသစေနိုင်လို့ပါ။ မ-ဟော်မုန်းတွေ ပုံမှန်ထွက်၊ လင်ယူ-သားမွေး၊ ကလေးယူဘို့လဲ စိတ်ချရမယ်။
Ovarian cyst တခါ ဖြစ်ဘူးရင် နောက်ထပ် မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ မပြောနိုင်ပါ။ ရာသီ မမှန်ရင်။ သိပ်ငယ်ငယ်ကတည်းက ၁၁-၁၂ နှစ်သမီးကစ ရာသီကလာရင်၊ ကလေးမရတဲ့သူ၊ လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်း နည်းသူ၊ ကိုယ်အပေါ်ပိုင်း အဆီများသူ တွေမှာ ဖြစ်တတ်လေ့ရှိတယ်။
အိတ်ထဲမှာရှိနေတာက အမျိုးမျိုး။ အများအားဖြင့် ခပ်ဝါ၀ါအရည်။ ချွေးထွက်အိတ်ထဲက အရည်မျိုးပါရင် ခပ်မြစ်ပြစ် ဖြစ်မယ်။၊ အဆီတွေ ပါနိုင်တယ်။ တချို့ကြ ထူးဆန်းတာတွေ ပါနေတတ်တယ်။ ဆံပင်လို အမွှေး၊ အရိုးလို၊ သွားလို၊ အရိုးနုလို စတာတွေ။ တောမှာ “အပင်းထည့်တယ်” လို့ ပြောတတ်ကြတာမျိုးပေါ့။ Dermoid cyst ခေါ်တယ်။ အမှန်က လူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ရှိနေတဲ့ (တစ်ရှူး) အမျိုးအားလုံးက ပါနေနိုင်တယ်။ မျိုးဥအိတ်သာ မဟုတ်ပါ အရေပြားမှာလည်း ဒါမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။
အဲလို ခွဲထားခံရသူအတွက် စိတ်မပျက်ပါနဲ့။ ကင်ဆာကို မပြောင်းစေတတ်ပါ။ ကလေးရဘို့ ၅၀% ဆိုတာ နည်းတဲ့ အခွင့်အလမ်း မဟုတ်ပါ။ သေခြာပါတယ်ဆိုတဲ့ တားဆေးတွေက ၉၉% စိတ်ချပါဆိုတဲ့ အထဲကနေ ကိုယ်ဝန် ဆောင်သူ ရှိတယ်။ အစား ရှောင်စရာ မလိုပါ။ ကျန်းမာအောင်သာ မျှတတဲ့အစာ စားပါ။ ဆေးလည်း ပုံမှန် အားဆေးသာ လိုပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုရင် OG နဲ့ ပြပါ။ အရင် ခွဲစိတ်မှတ်တမ်းတွေ သိမ်းထားဘို့ လိုမယ်။ ခွဲစိတ်ထားပြီး၊ ချက်ချင်း ကိုယ်ဝန် မယူသင့်သေးပါ။ သန္ဓေ တားဆေးသုံးရင် မျိုးဥမထွက်စေတာမို့ Ovarian cyst ဖြစ်မှာကို တားဆီးပေးရာကျတယ်။ ကလေး ယူတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝန်တားဆေး မသုံးဘဲ၊ ကြာရင် IUCD မကြာရင် Condom သုံးသင့်တယ်။ တဖက်ထဲကသာ မျိုးဥထွက်နေရသူမို့ ထွက်နေစေချင်တယ်။ ၃-၄ လအကြာ၊ ဘာမှ မတားတော့ရင် ကလေးအမေ အခေါ်ခံရပါတော့မယ်။
Posted by Dr. Tint Swe5comments
ဆရာရှင့်၊ ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးလေးတွေကို ဆရာ့ Blog မှာ ၀င်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလဲ ကြွက်တက်တဲ့ရောဂါနဲ့ ပတ်သတ်တာ သိချင်လို့ပါ။ ကျမအမေက ခြေသလုံးကြွက်သား ကြွက်ခဏခဏတက်လို့ ဆေးသောက်နေရပါတယ်။
ဘာကြောင့် ကြွက်ခဏခဏ တက်တာလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ရှင်။ ဆေးသောက်နေတုန်းပဲ သက်သာပြီး၊ ဆေးရပ် လိုက်တာနဲ့ ပြန်ဖြစ်နေလို့ ဆေးကို စွဲသောက်တာရော ကောင်းရဲ့လားဆိုတာ သိချင်လို့ပါ။ ဆေးမသောက်ဘဲ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာမျိုး၊ အစားအသောက် ရှောင်တာမျိုး လုပ်လို့ရလျင်လဲ ညွန်ပြပေးစေလိုပါတယ်။
ဘောလုံးသမားတွေ ကြွက်တက်တာကို ၀ါသနာအိုးတိုင်း မြင်သိကြတယ်။ ဘောလုံး မကန်ဘူးတဲ့သူတွေ အိမ်မှာနေရင်း၊ ကြွက်တက်တာတွေလည်း အများကြီးဘဲ။ ခြေသလုံးနဲ့ ပေါင်က ကြွက်သား အဖြစ်များဆုံးဘဲ။ အလွန်မတန် နာလှတယ်။ အိပ်နေရင်း နာတာမျိုးက ခြေ-လက်ကို အညောင်းဆန့်ရာကနေ ကြွက်သားမျှဉ် နည်းနည်းမှာ နာလာတာ။ ကြီးသူတွေမှာ အဖြစ်များတယ်လို့ မှတ်ကြပေမဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေလည်း ဖြစ်တာဘဲ။ အေးတဲ့အချိန် ပိုဖြစ်တယ်။
ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတာ ဆရာဝန်က အတိအကျ မပြောနိုင်ပါ။ မတိမကျ ပြောရရင်တော့ လှချင်-သန်ချင်လို့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာ၊ အားကစားလုပ်တာမှာ ကြွက်သား ပန်းသွားရလို့ပါ။ အားလည်း မကစားသူတွေမှာ အ၀လွန်လို့၊ ရေနဲ့ ဓါတ်ဆား နည်းသွားလို့၊ ရာသီ-သွေးဆုံး၊ ဟော်မုန်း နည်းသွားလို့၊ သွေးအလျှောက် နည်းလို့၊ အာရုံကြော-ကြွက်သား တခုခုဖြစ်လို့၊ “လို့” တွေကိုသာ အပြစ်ဖို့ပါလေ။ Statins (ကိုလက်စထော) ကျဆေး၊ ဆီးချိုကျဆေးနဲ့ လည်ပင်းကြီးဟော်မုန်း နည်းသူ တွေမှာလည်း ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။
ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဖြစ်တဲ့ကြွက်သားကို တအားတင်းအောင် လုပ်ပေးပါ။ ခြေသလုံးဖြစ်ရင် ခြေမကို အပေါ်ဆန့်ပေးသင့်တယ်။ တအားနှိပ်တာမျိုး၊ ဆန့်ပေးတာမျိုး လုပ်ပေးပြီးရင် ကြွက်သားကို သူ့အကြောအတိုင်း ခပ်ဖေါ့ဖေါ့ ဆက်နှိပ်ပေးပါ။
ဆရာဝန်တွေနဲ့ ကူတဲ့လူတွေထက် ခံရတဲ့လူက ဘာလုပ်ပေးရင် ကောင်းမယ်ဆိုတာ ပိုသိတယ်။ “နေရာတကာ ဆရာ-ဆရာဝန် မလုပ်ချင်နဲ့”။ ခိုင်းတာသာ လုပ်ပေးပါ။ ဒါပေမဲ့ ခိုင်းတာလုပ်တဲ့အကျင့် ဒါကလွဲရင် မကျင့်ချင်နဲ့။ “တပည့်ကြီးများ တိုင်းပြည်” ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ ဆား အစားနဲရင်၊ ချွေးထွက်များရင် နာတတ်တာတွေကလည်း ဒီသဘောမျိုးဘဲ။ ၀မ်းလျောလို့၊ (ပိုဆက်ဆီယမ်) နဲ့ (ကယ်လ်စီယမ်) နည်းလို့ ဖြစ်တာကို Tetany ခေါ်တယ်။ အူ၊ အစာအိမ်၊ သားအိမ်၊ ဆီးအိမ်၊ သည်းခြေအိတ်တွေမှာ အဲလိုဖြစ်လို့ နာတာကို Colicky pain လို့ခေါ်တယ်။ ရာသီလာတုံး နာတာကို Dysmenorrhea ခေါ်တယ်။ အခေါ်မတူပေမဲ့ အနာသက်သာဆေးတွေပေးတာ တူပါတယ်။ Paracetamol, Ibuprofen, Diclofenic ဆေး။ ကြွက်တက်တာကို Quinine (ငှက်ဖျားဆေး) အပြင် Naftidrofuryl, Dihydropyridine, Phenylalkylamine ဆေးတွေနဲ့လည်း ကုနိုင်တယ်။
သွေးတိုးကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ နှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ရောင်လို့ဖြစ်ဖြစ် ဆီးဆေး (ဆီးအောင့်တာ ပျောက်တဲ့ဆေး မဟုတ်၊ ဆီးအတင်း သွားစေတဲ့ဆေး) ကို မကြာခဏ သောက်ရသူများ၊ သောက်တိုင်း (ပိုဆက်ဆီယမ်) ဆေးသောက်ပါ။ ၀ယ်ရတာ ခက်တတ်တယ်။ ကောင်းတာက အုန်းရည် တလုံး-နှစ်လုံး သောက်လိုက်ပါ။ ရေနွေးကြမ်း အမြဲသောက်ပါ။
Vitamin B complex, Calcium, Potassium ကို ပုံမှန်သောက်ပါ။ Calcium gluconate ကို IV သွေးပြန်ကြောထဲ ထိုးပေး နိုင်တယ်။ ဒီဆေး သုံးမျိုးထဲက (ကယ်လစီယမ်) တခုဘဲ ဆီးကျောက်ရောဂါအတွက် သတိထားဘို့ လိုတယ်။ ကြာကြာ သောက်တာ ကိစ္စမရှိပါ။ အနာအကိုက် ပျောက်ဆေးတွေကတော့ အစာနဲ့ တွဲသောက်ရတယ်။ ဆေးတခုချင်းအကြောင်း သိချင်ရင် သပ်သပ် ရှာဖတ်ပါ။ ရေးတင်ထားတာ ရှိပါတယ်။
ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးတာ ကောင်းတယ်လို့ အေးတဲ့တိုင်းပြည်က ဆရာတွေက အကြံပေးတယ်။ ပူလောင်၊ အိုက်စပ်တဲ့ နေရာမှာ နေရသူတွေအတွက် ဒီအကြံက မဟန်ဘူး။ နာတဲ့နေရာ နှိပ်ပြီးတာနဲ့ အေးတာကပ်ပါ။ ရေ၊ ORS ဓါတ်ဆားရည် တိုက်ပါ။ ရေသောက် မနည်းပါနဲ့။ ရေပုလင်း မထားဘဲ၊ အားကစား မလုပ်နဲ့။ ဘယ်ကစား လုပ်လုပ်၊ သွေးပူအောင် အရင်လုပ်ပါ။ ဘာဘဲလုပ်လုပ် ပြင်းပြင်းထံထံ မလုပ်ခင်၊ ဖြေးဖြေး-မှန်မှန် လုပ်ပါ။
ဓါတ်ဆားတွေ ကြွယ်ဝတဲ့အစာတွေ စားသုံးရမယ်။ မေးရင် စာရင်းရှည်ကြီး ရှိတယ်။ လူစားတာတွေပါဘဲ။ (ကယ်လ်စီယမ်) ကြွယ်တာတွေက ပင်လယ်ငါး၊ ဒိန်ခဲ၊ တို့ဖူး၊ မုံလာစိမ်း။ (ပိုတက်ဆီယမ်) ကြွယ်တာတွေက အုန်းရည်၊ ငှက်ပြောသီး၊ ဆီးသီး၊ လိမ်မော်သီး၊ စပျစ်သီး၊ ဖရုံ၊ ဟင်းနုနွယ်၊ ဒိန်ချဉ်၊ ကွမ်းသီးဂေါ်ဖီထုပ်၊ အာလူး၊ ပဲသီးတောင့်၊ မုံလာဥချို။
ဖြစ်တတ်သူများ အိပ်ရင် ခြေထောက်အောက်က အခုအခံ ထားသင့်တယ်။ အိပ်ပျော်နေတုံး ခြေမ-ခြေထောက် အောက်စိုက်နေရင် ဖြစ်တတ်တယ်။ မအိပ်ခင် ဘယ်မှမရွေ့တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် စက်ဘီးစီးတာ ကာကွယ်ရာကျတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ခြေသလုံးတွေကို ဆုပ်နယ်ခံပြီးမှ အိပ်ရရင် ဇိမ်လည်းကျတယ်။ နှိပ်ပေးသူလည်း ပိုက်ဆံမရရင် ကုသိုလ်ရတယ်။ တက်မဲ့ ကြွက်လည်း မတက်နိုင်ဘူး။
Labels: Musculoskeletal system
“အကြောပြတ်ခြင်း” ကို ဖတ်ပြီး၊ “အကြောထုံး” တာလည်း သိချင်တယ်ဆိုလို့။ နောက်တခါ “သားကြောဖြတ်” တာ ရေးရမလားဘဲ။
ဗမာစကားမှာ “အကြော” ဆိုတာကို အလွယ် သုံးတတ်ကြတယ်။ Nerve အာရုံကြော၊ Muscle ကြွက်သား၊ Tendon အရွတ်၊ အကုန် အကြောချည်းဘဲ ပြောတယ်။ တခါတလေ ဘာပြောတယ်ဆိုတာ မှန်းမရတတ်ဘူး။ “ရှက်ကြောပြတ်တာ” တာ့ ဆရာဝန်ရော၊ လူနာပါ အတူတူ သိကြတယ်။ တခြားလူမျိုးတွေက မသိကြရှာဘူး။
သွေးကြောဆိုတာ နှလုံးကနေ တကိုယ်လုံး ရောက်အောင်လွှတ်ပေးတဲ့ Artery သွေးလွှတ်ကြော နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကနေ နှလုံးဆီကို ပြန်လာတဲ့ Vein သွေးပြန်ကြော ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်။ Capillaries သွေးကြောမျှဉ်လေးတွေ ဆိုတာလည်း ရှိပါသေးတယ်။ မျက်စိနဲ့တော့ မမြင်နိုင်ဘူး။ Varicose veins သွေးကြောထုံးရောဂါက သွေးပြန်ကြောမှာ ဖြစ်တာပါ။
သွေးပြန်ကြော အတွင်းမှာ တဖက်သတ်သာ သွေးစီးအောင်လုပ်ပေးတဲ့ Leaflet Valves အဆို့ရှင်တွေ ရှိနေတယ်။ သွေးလွှတ်ကြောကတော့ နှလုံးက ညှစ်ပေးလို့ သွေးစီးသွားစေနိုင်ပေမဲ့၊ သွေးပြန်ကြောထဲက သွေးတွေ နောက်ပြန် မစီးအောင် သူတို့ကနေ လုပ်ပေးကြတယ်။ ဒီကောင်တွေ ကောင်းကောင်း အလုပ် မလုပ်တော့ရင် ဒီရောဂါ ရတယ်။ အမှန်က အကြောတွေ ထုံးနေတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဖေါင်း-ရောင်-တွန့်နေတာပါ။ ခပ်ပြာပြာ၊ အရေပြားပေါ်မှာ ဖေါင်းကြွနေတာ။ အများဆုံး တွေ့နိုင်တာက ခြေသလုံး နောက်ဖက်မှာ။ ကြာလေ ဖေါင်းလေ။ ကြည့်မကောင်းတာအပြင် နာတတ်တယ်။ ယားတတ်တယ်။
အသက် ၅၀ ကျော်ရင် ၂ ယောက်မှာ ၁ ယောက်လောက် အနည်းနဲ့အများ ရှိလာတတ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုများတယ်။ မျိုးရိုး လိုက်တတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတာ၊ အ၀လွန်တာ၊ သွေးဆုံးတာ၊ အသက်ကြီးတာ၊ အကြာကြီး ရပ်ရတာ၊ ခြေထောက် ခိုက်မိတာတွေကြောင့် ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ Piles လိပ်ခေါင်းဆိုတာလည်း စအိုမှာ ဒီလိုသဘော ဖြစ်တာပါဘဲ။ ဒါ့အပြင် ခပ်ဆင်ဆင် Spider veins ပင့်ကူလို ဖြစ်နေတာလည်း ရှိတယ်။
ခြေထောက် ရောင်လာမယ်။ Cramps ကြွက်သား နာတာ ဖြစ်တတ်တယ်။ သူကို ခိုက်မိလို့ အနာဖြစ်ရင် ပျောက်ခဲလှတယ်။ အနာကို ခိုက်မိပြန်ရင် သွေးအလွန်ထွက်မယ်။ ခြေမျက်စိအနားမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ နှင်းကူနာလိုပါ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ အသက်ကြီးသူတွေဆိုရင် Thrombophlebitis သွေးပြန်ကြောရောင်တာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ပြဿနာ ကြီးတာက သိပ်ဆိုးမှပါ။ သွေးလျှောက်တာ နည်းလွန်းလာလို့။ လမ်းတောင် မလျှောက်နိုင်၊ မရပ်နိုင် ဖြစ်လာတယ်။ တချို့ကြ အနာက Carcinoma or Sarcoma ကင်ဆာ ပြောင်းသွားတတ် သေးတယ်။
ခြေထောက်မြှင့်ထားပြီး နားပါ။ Compression stockings ကြပ်အောင်စီမံထားတဲ့ ခြေအိမ်တမျိုး ၀တ်ထားပါ။ နာတာကို Ibuprofen သောက်ရတယ်။ Aspirin ကတော့ သွေးခဲတာအတွက်ပါ ကောင်းတယ်။ အစာလမ်း သွေးမယိုအောင်တော့ သတိထားပါ။ သွေးခဲတာဖြစ်ရင် သွေးမခဲဆေး Anti-coagulation ပေးမယ်။ Thrombectomy, Foam Sclerotherapy အခဲကိုခွဲထုတ်တာ လုပ်ရတယ်။
သွေးကြောထုံးတာကို သမားရိုးကျ ခွဲစိတ်နည်းက Vein stripping ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်တဲ့သွေးပြန်ကြောကို ခွဲထုတ်ပြစ်တာပါ။ ခေတ်ပေါ်နည်းကတော့ Ultrasound သုံးပြီး Sclerotherapy နဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်းသုံးတဲ့ Radiofrequency ablation နောက်ပြီး လေဆာသုံးတဲ့ Endovenous laser နည်းတွေဖြစ်တယ်။ ခြေထောက်ကနေ နှလုံးဆီကို ပြန်လာတဲ့ သွေးတွေရဲ့ ၉၀% က အတွင်းပိုင်းက သွေးပြန်ကြောတွေကနေ လုပ်ပေးတာမို့၊ သွေးကြောထုံး ဖြစ်စေတတ်တဲ့ အပေါ်ယံ သွေးပြန်ကြောကို ခွဲစိတ်ထုတ်ပြစ်တာ ပြဿနာမကြီးဘူး။
ခြေထောက် အဖျားပိုင်းကို မြှင့်ထားပြီး နားပါ၊ ထိုင်နေရင်လည်း ခြေထောက်တွေကို ချိတ်မထားနဲ့။ အောက်ပိုင်း အ၀တ်အစား ခပ်ချောင်ချောင်ဝတ်။ ထမီ နဲ့ ဂါဝန်။ စကပ်လည်းရတယ်။ မတိုစေနဲ့ အကြောထုံးတာ လူမြင်မယ်။ အ၀ မလွန်၊ အလွန် မ၀စေနဲ့။ ရပ်ရတဲ့ အလုပ်မှန်သမျှ ရှောင်။ မတ်တတ်ရွာကလူတွေ သတိထား။ မရပ်ရအောင် ရေတောင် မချိုးနဲ့ ရေဘဲကူး။ ရှူပေါက်ရင်လည်း ရပ်မပေါက်နဲ့။ အမျိုးသမီးတွေ အဖြစ်များတာ ဒါ့ကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဝန်မဆောင်နဲ့။ သွေးမဆုံးစေနဲ့။ အသက် မကြီးစေနဲ့။
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၇) အမျိုးသမီး ပြီးခြင်း Female orgasm
တယောက်ကနေ သူ့ဇနီးမှာဖြစ်နေတာကို အင်္ဂလိပ်လိုရေး မေးလာလို့ ဖြေတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။
“Orgasm ဆိုတာ လိင်စိတ်နိုးဆွရာက ဖြစ်လာတဲ့ အကျိုးရလဒ် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တရပ်” လို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ပါတယ်။ “လိင်ဆက်ဆံမှု ဖြစ်စဉ်ရဲ့ အဆုံးပိုင်း” လို့ ယေဘူယျပြောကြပေမဲ့ အတိအကျဆိုရင် မဟုတ်သေးပါ။ (မာစတာဘေးရှင်း) ကို ဆက်ဆံမှုတခုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခုဖြစ်ဖြစ်၊ အပြီးရောက်သွားအောင်ဖြစ်ဖြစ် လုပ်လို့ရတယ်။ တယောက်တည်းက ဖြစ်ဖြစ် တယောက်မကဖြစ်ဖြစ်၊ အင်္ဂါတမျိုးထဲသုံးပြီး ရရှိနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Orgasm ကျား-မ နှစ်မျိုး ရှိတာထဲက “မ” နဲ့ ပတ်သက်တာကိုသာ ရွေးရေးပါမယ်။
အပြီးရောက်ဘို့ ယောက်ျား ၂-၅ မိနစ်၊ မိန်းမ ၂၀ မိနစ်ကြာတယ်လို့ ဆိုတယ်။ သုတေသန အမျိုးမျိုးက ကိန်းဂဏန်း အမျိုးမျိုး ထုတ်တယ်။ မတူကြဘူး။ မတူတဲ့ အထဲမှာ တူတာက “အမျိုးသမီးများဟာ ယောက်ျား တခါပြီးတိုင်း၊ သူတို့ တခါမပြီးပါ။” ထပ်တူသေးပြန်တာက “မိန်းမတွေ ရာနှုံးတချို့ (၇-၁၀%) က တခါမှ မတခါဘူး။” တချို့ဆိုရင် Orgasm ဖြစ်ရမှန်းကိုတောင်မှ မသိရှာကြပါ။
၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာ ကျား ၃၁၂ နဲ့ မ ၃၈၂ ကို Orgasm ဖြစ်ရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာသလဲဆိုတာ စမ်းသပ်ပြီး၊ ထုတ်ပြန်တာက “စိတ်လှုတ်ရှားမှု အရှိန်တက်လာ၊ သွေးစီးဆင်းမှု များလာ၊ ဒီအဆင့်မှာ တန်းနေရာကနေ (အော်ဂဇင်) ဖြစ်လာပြီး၊ နောက်ဆုံး အားလုံး ပြန်လျှော့ကျသွားတယ်။” လို့ ဆိုပါတယ်။ ၁၀ နှစ်ကြာတော့ အမျိုးသမီး သုတေသီတယောက်ကနေ ထပ်ဖြည့်တာက “စိတ်လှုတ်ရှားမှုထဲမှာ စိုးရိမ်မှု၊ ခုခံနိုင်စွမ်းမဲ့မှုနဲ့ အပြန်အလှန် ပြောဆိုနိုင်စွမ်းမရှိမှု တွေကြောင့် လိင်စိတ်ကို နည်းစေနိုင်သလို၊ (အော်ဂဇင်) ရမှာကိုပါ တားဆီးစေနိုင်တယ်။” တဲ့။
နောက် ၁၀ နှစ်ကြာပြန်တော့ အမျိုးသမီးပညာရှင် တယောက်က “Desire ဆန္ဒက Arousal စိတ်ဖြစ်ပေါ်မှု နဲ့ Orgasm ပြီးဆုံးခြင်းကို သက်ရောက်စေတာ မှန်ပေမဲ့၊ Orgasm ဟာ အထွတ်အထိပ် မဟုတ်ဘူး။ ဆက်ဆံမှု အဆင့်တဆင့်မှာလည်း ကျေနပ်မှု ရစေနိုင်တယ်” လို့ ယူဆပါသတဲ့။ (အော်ဂဇင်) ဟာ သာယာမှုအထွတ်အထိပ်လို့ အလွယ်ပြောတာ သိပ်မမှန်ပါ။ အဓမ္မပြုကျင့်တာ ခံရတဲ့အခါ ရှက်စိတ်နဲ့ရောပြီး၊ “အနည်းအပါး” ဖြစ်သွားတတ်သေးတယ်။
Orgasm ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အများကြီး အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ၁၉၉၇ တုံးက British Medical Journal မှာ အသက် ၄၅-၅၉ ရှိသူ ယောက်ျား ၉၁၈ ဦးကို ၁၀ နှစ်တာ စမ်းသပ်တဲ့အခါ၊ Orgasms နည်းနည်းသာ ဖြစ်ခဲ့သူတွေက ပိုပြီး အသက်တိုတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှု ရှိခဲ့သူတွေမှာ နှလုံးရောဂါဖြစ်တာလည်း ထက်ဝက် နည်းတယ်လို့ ရေးခဲ့တယ်။ (ကလိုရီ) အများကြီး သုံးပြစ်လို့ အလေးချိန် ကျစေနိုင်တယ်။
ဒီအဆင့် ရောက်တော့မယ် ဆိုတာကို သူမကိုယ်တိုင် သိတယ်။ Sex flush မျက်နှာနီမြန်းလာမယ်။ Clitoris သန်မာလာပြီး၊ အတွင်းကို ငုံ့လာတယ်။ Vagina ပိုစိုစွပ်လာပြီး၊ နုတ်ခမ်းကြွက်သားငယ်က အရောင်ရင့် လာမယ်။ အ၀ပိုင်းက ကြုံ့-ကြပ်လာပြီး၊ ကျန်အပိုင်းက ပိုရှည်၊ ပိုကျယ်၊ ပိုဖေါင်းကြွလာတယ်။ ရင်သားထိပ် တင်းတောင့်လာတယ်။ သားအိမ်၊ မွေးလမ်း၊ စအို၊ တင်ပါးဆုံထဲက ကြွက်သားတွေ “အလိုအလျောက်” စည်းချက်ကျကျ ကြုံ့လာတယ်။ နှလုံးခုန်နှုံး မြန်လာတယ်။ အသက်ရှူတာ မြန်လာ-ပြင်းလာတယ်။ ဒါ့ပြင် သားအိမ်ကပါ ၃-၁၅ ခါလောက် ကြုံ့လာတယ်။ ကလေးဖွါးချိန် ထွက်တဲ့ Oxytocin ဟော်မုန်း ထွက်လာတယ်။ သာယာမှု အထွတ်အထိပ်ကို ခံစားရတယ်။ Euphoric sensation “ပီတိလွှမ်းဖြာ ခံစားမှုပါ” လို့ ပြောနိုင်တယ်။
Orgasm ကိုတော့ လူတိုင်းလိုလိုက သိကြတယ်။ Anorgasmia, Ejaculatory Anhedonia, Inorgasmia ဆိုတဲ့ ဆေးဝေါဟာရတွေကိုတော့ ဆရာဝန်တချို့တောင်မှ သိပ် သတိမထားမိတတ်ကြပါ။ Orgasm မဖြစ်တာကို ခေါ်တာပါ။
ယောက်ျားတွေက Orgasm control လုပ်နိုင်တာ၊ အမျိုးသမီးတွေက Orgasm များများရတာမျိုးက အတွေ့အကြုံနဲ့ အသိတရားပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ အိမ်ထောင်ကျခါစ မဖြစ်သေးတာ လူလိုကိုယ်လိုပါ။ မိန်းကလေးတွေဟာ ငယ်ရင် ဖြစ်သွားခဲ့တာကို သိချင်မှ သိအုံးမယ်။ သူ့အဆင့်နဲ့သူ တိုးတက်လာမှာပါ။ ဖြစ်စေ-ကောင်းစေ လုပ်နိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေလည်း ရှိတော့ရှိတယ်။ အများအားဖြင့် တရားမ၀င်ဆေးတွေမို့ မရေးတော့ပါ။ နာမည်ကြီး Viagra နဲ့ အလားတူ Vigora ဆေးတွေဟာ ပန်းညှိုးရောဂါအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးက ကျားအင်္ဂါမှာ သွေးပိုစီးလျှောက်စေတယ်။ စိတ်ဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ ပန်းညှိုးတာ မဟုတ်လည်း သုံးရင် အချိန်ကြာကြာ တောင့်တင်းနေစေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသမီးကို Orgasm ရအောင် ကူညီဘို့ အချိန်ပိုရစေနိုင်တယ်။ တကြိမ်မှာ ၅၀ မီလီဂရမ်ဆို လုံလောက်တယ်။
ဒီအချိန်မျိုးတွေမှာ အမျိုးသမီးကနေ Cry and Moan အသံထွက်တာ၊ အော်တာ၊ ငိုမလိုဖြစ်တာမျိုးက တယောက်နဲ့ တယောက် မတူဘူး။ အသံလုံးဝ မထွက်သလောက်နဲ့ ကျယ်လောင်တာအထိ ကွာခြားတယ်။ တယောက်တည်း တောင်မှ တချိန်နဲ့ တချိန်၊ တရွယ်နဲ့ တရွယ် မတူဘူး။ ဒါရိုက်တာကနေ မင်းသားကို ပြောချင်တယ် “သူများလို မဟုတ်လို့ ကိုယ့်မင်းသမီးကို အထင်မသေးသင့်ဘူး။”
Posted by Dr. Tint Swe 29 comments
ဒီတစ်ခါတော့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် စပျစ်သီးသန္ဓေအကြောင်းကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ စပျစ်သီးသန္ဓေကို Molar Pregnancy လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ် ။ ရှားပါးတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အဖြစ် လည်း မများပါဘူး ။ တစ်ချို့ကတော့ ဒီရောဂါအကြောင်းကို ကြားဖူးယုံသာကြားဖူးပြီး တချို့ကတော့ လုံးဝကို မ သိကြ ပါဘူး ။ စပျစ်သီးသန္ဓေကို နောက်တစ်မျိုး Vesicular Mole လို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ် ။
အမျိုးသားဆီက ဖိုမျိုးစေ့နဲ့ အမျိုးသမီးဆီက မမျိုးစေ့တို့ ပေါင်းစပ်ထိတွေ့တယ်ဆိုရင်ပဲ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် Physiology နည်းအရ ကိုယ်ဝန်ဆိုတာဖြစ်လာရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဝန်မရင့်သေးခင် အစောပိုင်းမှာ မှားယွင်း မှု ၊ ဖောက်ပြန်မှု ၊ အားနည်းမှု တစ်ခုခုကြောင့် အချင်းစတင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအပေါ် အဓိကကျတဲ့ ပြောင်း လဲမှု တွေကြောင့် သန္ဓေသားဖြစ်ပေါ်လာရမယ့်အစား စပျစ်သီးလိုမျိုး ရေအိတ်အလုံးလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကိုယ်ဝန် ကို စပျစ်သီး သန္ဓေလို့ခေါ်ပါတယ် ။
စပျစ်သီးသန္ဓေအမျိုးအစားတွေက ဘာတွေလည်း ?
ရောဂါရဲ့ ရာနှုန်းပြည့် စပျစ်သီးကဲ့သို့ အလုံး အပြွတ်လေးများသာ တွေ့ရပါတယ် ။ အချို့ကတော့ ရေအိတ် အလုံးလေးတွေနဲ့ အချင်းကို တွဲဖတ်ပြီးတွေ့ရပါတယ် ။ အချို့ကတော့ ရေအိတ်အလုံးငယ်လေးတွေနဲ့ သန္ဓေသား ကို ရေထွေးပြီးတွေ့ရတတ်ပါတယ် ။ အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံသူတွေက အနောက်ဥရောပ သူတွေထက် အဖြစ်များပြီး အရှေ့ တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ၅၀၀ မှာ တစ်ယောက်နှုန်းလောက်ပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ၂၀၀၀ မှ ၃၀၀၀ လောက်မှာမှ တစ်ယောက်လောက်သာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
စပျစ်သီးသန္ဓေဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေလည်း ?
ယခုအချိန်အထိ ဖြစ်ပွားစေတဲ့အကြောင်းအရင်းကို အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး ။ ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်တွေကတော
၁ ။ ဖိုမျိုးစေ့နဲ့ မမျိုးစေ့ ဓါတ်ခံအား မတူ၍ မတည့်၍သော်လည်းကောင်း
၂ ။ အစားအသောက်နဲ့အာဟာရ မတူ ချို့တဲ့ကြ၍ လည်းကောင်း
၃ ။ ရာသီဥတု အနေအထားကြောင့်လည်းကောင်း
၄ ။ အခြားအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့တော့ ဆက်စပ်မှု မရှိပါဘူး ။
ပြသတဲ့ လက္ခဏာတွေတွေက ဘာတွေလည်း ?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ပထမပိုင်း 1st Trimester မှာအဖြစ်များပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက်တွဲကိုယ်ဝန်ကျမှလည်း ဖြစ်ပွားတာတွေရှိပါတယ် ။
၁ ။ သာမန်ကိုယ်ဝန်ကဲ့သို့ ဓမ္မတာသွေးထိမ်ခြင်း
၂ ။ ဆီးစစ်ရာတွင် နှစ်ကြောင်းပေါ်ခြင်း
၃ ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ခံစားရလေ့ရှိသော အော်ကလီဆန်ခြင်း ၊ မူးဝေခြင်း ၊ ပျို့အန်ခြင်းများ ပိုမိုဖြစ်ခြင်း
၄ ။ ကိုယ်ဝန်ရှိပြီး မကြာမီ သွေးမကြာမကြာဆင်းခြင်း
၅ ။ ကလေးလှုပ်ချိန်တွင် ကလေးမလှုပ်ခြင်း
၆ ။ သားအိမ်အရွယ်အစားနဲ့ အမြင့်မှာ သွေးထိမ်သည့်လထက် ပိုမိုကြီးထွားမြင့်တက်နေခြင်း(ရှိသင့်သည့် အရွယ် နှင့် ရှိသင့်သည်ထက် သေးငယ်နေခြင်း)
စသည်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဗိုက်ကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့စမ်းသပ်ခြင်း ၊ Ultrasound ရိုက်ခြင်း စတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ သိနိုင်ပါတယ် ။ တခါတရံ သွေးဆင်းရာမှာ စပျစ်သီးကဲ့သို့ အလုံးလေးတွေ သွေးခဲတွေနဲ့အတူ ပါလာတတ်ပါတယ် ။
စပျစ်သီးသန္ဓေကို ဘယ်လိုကုမလည်း ?
သွေးမဆင်းမီ နဲ့ ကိုယ်ဝန်ပျက်မကျမီ သိရှိခဲ့ရင်တော့ ထွက်ကျလာအောင် ဆေးပေး ဆေးသွင်းရပါတယ် ။ သားအိမ်ကို ချဲ့ပြီး သားအိမ်ခြစ်ခြင်း လေစုပ်စက်နဲ့ စုပ်ယူခြင်း (Vacuum suction Curettage ) တို့ဖြစ်ပါတယ် ။ လူနာဟာ အသက် ၄၀ ၀န်းကျင်လည်းဖြစ်မယ် မိသားစုလည်း စုံလင်မယ် သားသမီးတွေ လည်းရှိထား တယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီလိုလူနာတွေအတွက် နောက်ဆုံး သားအိမ်ထုတ်ခြင်းနည်းနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ် ။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ မျက်စိနဲ့ စပျစ်သီးလိုမျိုး အလုံးလေးတွေ တွေ့နေရတယ်ဆိုသော်လည်း ဓါတ်ခွဲခန်းကို ပို့ပြီး သေချာစီစစ်ဖို့လိုပါတယ် ။ တစ်ချို့က တပိုင်းကင်ဆာ ပြောင်းလဲနေမှုများ (Chorio Carcinoma / Malignant Mole) စသဖြင့်တွေ့နိုင်ပါတယ် ။ အဲဒီလို ပြောင်းလဲတဲ့လူနာတွေအတွက်လည်း သင့်တော်တဲ့သွေးသွင်း ကုသခြင်းနဲ့ အချိန်တိုအတွင်း ရာနှုန်းပြည့်ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ် ။
ကုသပြီးပြီဆိုသော်လည်း နောက်ဆက်တွဲ Follow Up ပြသဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ ၁ လ တစ်ကြိမ် ၃ လ ။ ၃ လတစ် မကြိမ် ၆ လ တစ်ကြိမ်နဲ့ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် အနည်းဆုံး နှစ်နှစ်ထိပြသရန်လိုအပ်ပါတယ် ။ အဲဒီလိုပြန် လည်ပြ သတဲ့အခါတိုင်းမှာလည်း ဆီးစစ်ခြင်း (UCG) ၊ Ultrasound ရိုက်ခြင်းနဲ့ ရင်ဘတ်ကို ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။ ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ လာပြသတဲ့အခါတိုင်း အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်ခြင်း နဲ့ မလုံ လောက် ပါဘူး ။
ဒီရောဂါဟာနောက်ထပ် ထပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အလွန်ကိုပဲ ရှားပါးပါတယ် ။
နောက်ထပ် ကလေးယူလို့ရမရ ?
နောက်ထပ်ကလေးယူလို့ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ရောဂါဖြစ်ပြီး Follow Up ၂ နှစ်အတွင်းမှာတော့ ကိုယ်ဝန် မယူရပါဘူး ။ ကိုယ်ဝန်တားတဲ့အခါမှာလည်း ဟော်မုန်းမပါတဲ့သန္ဓေတားနည်းတွေနဲ့ တားသင့်ပါတယ် ။ ဥပမာ ရက်ရှောင်ခြင်း ၊ ကွန်ဒုံးသုံးခြင်း စသည်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ စပျစ်သီးသန္ဓေဖြစ်ပွားဖူးယုံနဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် မှာ မျိုးဆက်ပွား အရည်အသွေး ကျဆင်းသွားခြင်းမရှိပါဘူး ။ စောစီးစွာ ပြသကုသလျှင် ထိရောက်စွာ ပျောက် ကင်း နိုင်သောရောဂါဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ယနေ့ခေတ် တောရွာတွေမှာ မြို့နဲ့ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ကျေးလက်တွေမှာ ကိုယ်ဝန်သည်တွေဟာ ကလေး စတင်လှုပ်ချိန် ကိုယ်ဝန်ငါးပတ်အလယ်လောက်မှ ကလေးမလှုပ်မှန်းသိကြရပြီး အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်က လည်း အလွန်အမင်းတင်းကျပ်ပေါက်ထွက်ခြင်း ၊ ၀မ်းဗိုက်ထဲမှာ သွေးသွန်ခြင်း တို့ကြောင့် အသက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ် ။ နောက်တခါ ကိုယ်ဝန်နုစဉ်မှာ သွေးထွက်လွန်နိုင်ပြီး သားအိမ်ပေါက်ပြဲခြင်း ဖြစ်တတ်တဲ့ အတွက် ကျွမ်ကျင်တဲ့ဝါရင့်ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ကုသဖို့လည်းလိုပါတယ် ။ Follow Up ကြည့်ရှုဖို့ အတွက်တော့ OG တွေရှိတဲ့ဆေးရုံတွေကိုသာ ညွှန်ကြားဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။
Ref : (1) Reproductive Health
(2) Obestetric and Gynaecological Problems
(3) Google Image Search
(4) Health Education for Reproductive Health (Myanmar -Professor Myint Maung Maung)
Labels: Molar Pregnancy, Reproductive organ disorders မျိုးပွားအင်္ဂါ ပြဿနာ
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၇) အမျိုးသမီး ပြီးခြင်...